काठमाडौं, २४ माघ | माघ २४, २०७४
मंगलबार नेप्से परिसूचक घटेको छ । १ हजार ४ सय बिन्दुलाई लगानीकर्ताहरूले मनोवैज्ञानिक बिन्दु मान्दै आएका छन् । तर, यस दिन नेप्से सो बिन्दुभन्दा पनि तल झरेको छ । बजार खुलेको केही समयपछि ओरालो लागेको नेप्से, कारोबार अवधिभर ६ दशमलव शून्य २ अंक घटेर १ हजार ३ सय ९४ दशमलव शून्य ३ बिन्दुमा पुगेको छ । बढ्दो सेयर आपूर्तिले बजार घट्न दबाब पुगेको छ । आपूर्ति बढेपछि बजारमा विक्रेता हावी भएको एक ब्रोकरले बताए । आपूर्तिअनुसार माग नभएपछि मूल्य घट्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । सेयरको आपूर्तिअनुसारको माग पूरा गर्न बजार विस्तारका कार्य गर्नुपर्नेछ । बजार घटेपछि लगानीकर्ता आत्तिएका देखिन्छन् । यसले बजारमा थप बिक्रीचाप बढाएको छ । यस दिन नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ । बजार सुस्त हुँदा कारोबार रकममा पनि कमी आएपछि लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन् ।
यस दिन १ सय ५२ कम्पनीको २ हजार ९ सय २७ पटकको कारोबारमा रु. २४ करोड २० लाख ९६ हजार १ सय ४६ बराबरको ७ लाख ९ हजार ८ सय ३ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । यो अघिल्लो दिनको तुलनामा २१ दशमलव ३६ प्रतिशत कम हो । लगानीकर्ताको सम्पत्ति पनि घटेर रु. १६ खर्ब ३० अर्बमा सीमित भएको छ । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन ३६ दशमलव शून्य ५ स्केलमा रहेको छ । न्युट्रल जोनमा रहेको आरएसआईले बजारमा सेयर खरिदबिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्दछ । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन १ दशमलव १७ अंक घटेर २ सय ९४ दशमलव ६२ बिन्दुमा पुगेको छ ।
कारोबार संख्या र कारोबार रकमका आधारमा यस दिन सानिमा मार्ई हाइड्रोपावर अगाडि रहेको छ । यस दिन सो कम्पनीको १ सय ६७ पटकको कारोबारमा रु. १ करोड ६३ लाखभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ । सेयर संख्याका आधारमा भने लुम्बिनी विकास बैंकको संस्थापक सेयर अगाडि रहेको छ । सो कम्पनीको ५० हजार कित्ता संस्थापक सेयर खरिदबिक्री भएको छ । सिन्धु विकास बैंकको सेयरमूल्य यस दिन ४ दशमलव ५८ प्रतिशत बढेको छ । कर्णाली विकास बैंकको सेयरमूल्य ४ दशमलव ६१ प्रतिशत घटेको छ । कारोबारमा आएको १ सय ५२ कम्पनीमध्ये २८ कम्पनीको सेयरमूल्य बढेको छ भने ९७ कम्पनीको सेयरमूल्य घटेको छ । बाँकी २७ कम्पनीको सेयरमूल्य यस दिन स्थिर रहेको छ ।
यस दिन कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक घटेको छ । ट्रेडिङ समूहको परिसूचक २ दशमलव ७१ प्रतिशत, जलविद्युत् समूहको १ दशमलव २६ प्रतिशत, बैंकिङ समूहको शून्य दशमलव ४७ प्रतिशत, माईक्रोफाइनान्स समूहको शून्य दशमलव ४५ प्रतिशत, बिमा समूहको शून्य दशमलव ४२ प्रतिशत, होटेल समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव २५ प्रतिशत, ‘अन्य’ समूहको शून्य दशमलव शून्य ४ प्रतिशत र वित्त समूहको शून्य दशमलव शून्य ३ प्रतिशत घटेको छ ।
एसियनको २ः१ हकप्रद
एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले फागुन १३ गतेदेखि २ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता रु. एक सय अंकित मूल्यका ४० लाख २७ हजार ९ सय ६६ दशमलव २० कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । हकप्रद निष्कासन बन्द हुने मिति चैत १८ गते रहेको छ ।
कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ । सेयरधनीहरूले एनआइबिएल क्यापिटललगायत एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सका शाखा कार्यालय र आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु. ८० करोड ५५ लाख ९३ हजार २ सय ४० रहेको छ । हकप्रद सेयर बाँडफाँटपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु. एक अर्ब २० करोड ८३ लाख ८९ हजार ८ सय ६० पुग्नेछ । हकप्रद सेयर निष्कासन प्रयोजनका लागि कम्पनीको सेयरदर्ता पुस्तिका माघ ८ गते बन्द गरिएको थियो ।
पञ्चकन्याको आइपिओ निष्कासन बन्द
पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले माघ ५ गतेदेखि निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको आइपिओमा आवेदन दिने म्याद माघ २३ गते सकिएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि ११ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको थियो ।
निष्कासन गरिएको कुल सेयरमध्ये ६० प्रतिशत इलाम जिल्लास्थित सिकन्दपुर गाँउपालिकाका बासिन्दालाई र ४० प्रतिशत इलाम नगरपालिकाका बासिन्दालाई बाँडफाँट गरिनेछ । कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
हाम्रोको बोनस सेयर
हाम्रो विकास बैंक लिमिटेडले ७ दशमलव ३० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । साथै, सो बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि बैंकले रु. १७ लाख ५८ हजार १ सय ६२ दशमलव ४९ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । माघ २२ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले सो लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । सो लाभांश वितरण गर्न स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाइनेछ ।
मंगलबार नेप्सेमा कुल चार कम्पनीले १ करोड ९ लाख २१ हजार २ सय ४५ कित्ता सेयर सूचीकृत गरेका छन् । यस दिन आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २३ लाख कित्ता हकप्रद सेयर सूचीकृत गरेको छ । त्यसैगरी, छिमेक लघुवित्तले १६ लाख ५९ हजार २ सय ९३ कित्ता र आइसिएफसी फाइनान्सले ८ लाख ३ हजार ८ सय ८५ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत गरेको छ भने बैंक अफ काठमाडौँले ६१ लाख ५८ हजार ६७ कित्ता संस्थापक सेयर सूचीकृत गरेको छ ।
मितेरीको नाफा घट्यो
चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको खुद नाफा घटेको छ । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन मुनाफा घटेपछि खुद नाफा घटेको छ । बैंकको ब्याज खर्च र अन्य सञ्चालन खर्च बढेपछि नाफालगायत सञ्चालन मुनाफा र ब्याज आम्दानीमा प्रभाव परेको हो । साथै, बैंकको कर्मचारी खर्च गत आवको तुलनामा २८ प्रतिशत बढेपछि नाफामा प्रभाव परेको देखिन्छ । जगेडा कोषको रकम सामान्य सुधार भएर रु. १२ करोड ८४ लाख पुगेको छ ।
नेप्सेमा तीव्र उतार–चढाव
वित्तीय विवरणको प्रभाव नेप्सेमा,२.४३ प्रतिशत बढ्यो